अर्थ/बाणिज्य Archives - NepalPana
काठमाडौँ (रासस) : मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले नेपालको शहरी क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त रकम स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल सरकारको अनुरोध बमोजिम शहरी विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बाट सहायतका रुपमा प्राप्त हुने १५० मिलियन अमेरीकी डलर […]
चौधरी ग्रुपले यस वर्षमा कति तिर्यो राज्यलाई कर ?
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपले आफूले वर्षमा ७८८ करोड कर तिरेको जनाएको छ । तर, सरकारले संस्थागत घरानाबाट तिरिने करलाई वर्गीकरण नगर्दा आफूहरु सम्मानित हुनबाट छुटेको दावी गरेको छ । सीजीले अधिक कर बुझाउने व्यक्तिका रुपमा सम्मानित करदाताहरुलाई बधाई ज्ञापन गर्दै राज्यद्वारा यसरी गरिने वर्गीकरण र […]
– रमेश लम्साल काठमाडौंँ (रासस) : नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण भइरहेका चार महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाले निकट भविष्यमा साधारण शेयर जारी गर्ने तयारी गरेका छन् । माथिल्लो तामाकोशी, रसुवागढी, साञ्जेन र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत् आयोजनाले साधारण शेयर जारी गर्ने तयारी गरेका हुन् । साधारण शेयर जारी […]
इटहरी (रासस) : अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले देश समृद्ध बनाउने मुख्य स्रोत राजश्व भएकाले यसका लागि मन्त्रालयले विशेष कार्यनीति ल्याएको बताउनुभएको छ । अर्थमन्त्री कार्कीले आज सुनसरीको इटहरीमा रहेको राजश्व अनुसन्धान विभागको पूर्वाञ्चल इकाइ कार्यालयको अवलोकन एवं निरीक्षण गर्दै विशेष कार्यनीतिलाई कार्यान्वयनका लागि इमान्दार भएर लाग्न […]
कुलमान आएपछि यसरी उँभो लाग्यो विद्युत प्राधिकरण, एक वर्षमा के के काम गरे ?
काठमाडौँ। एउटा मान्छे बदलिँदा सरकारी संस्थान कसरी सफलताको दिशामा जाँदो रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको छ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले । सरकारले गत वर्ष आजैका दिन प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त ग¥यो । उहाँ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुनु अगाडि प्राधिकरणले हिउँदमा सात घण्टा दैनिक विद्युत्भार कटौती […]
भारतलाई काउन्टर दिँदै नेपालमा चीनबाट आयो अहिलेसम्मकै ठूलो लगानी, रच्यो इतिहास!
काठमाडौँ। मुलुकमा हालसम्मकै ठूलो वैदेशिक लगानी भित्रने भएको छ । लगानी बोर्ड र होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालिबीच एक ठूलो सिमेन्ट कारखाना स्थापनाका लागि आज परियोजना लगानी सम्झौता भएपछि ठूलो परिमाणको लगानी भित्रने भएको हो । सम्झौताअनुसार रु ३६ अर्ब ७५ करोड बराबरको चिनियाँ लगानी मुलुक […]
उर्लाबारी (मोरङ) । विश्व बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकामा करिब २०० करोड लगानी गर्ने भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयमार्फत विश्व बैंकले नगरपालिकाको दीर्घकालीन विकास तथा रणनीतिक योजनामा रु २०० करोडसम्मको लगानी गर्न लागेको हो । मन्त्रालयले पूर्वका चार शहरलाई नमूना शहरका रुपमा विकास गर्ने योजनाअन्तर्गत उर्लाबारी […]
काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा यस साता रु तीन अर्ब ५६ करोड एक लाख २३ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्चेन्जकाअनुसार कुल १८० कम्पनीको ७५ लाख ८४ हजार ५९० कित्ता शेयर खरिद बिक्री भएका छन् । कारोबार रकम गत साताको भन्दा ७ […]
काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघको साधारणसभा तथा अधिवेशन सुरु
काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघको १५ औं साधारण सभा तथा आठौं अधिवेशन आजबाट सुरु भएको छ । काठमाडौंको बानेश्वर ब्यांकेटमा आजदेखि सुरु भएको साधारण सभाको उदघाटन नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष शरदकुमार गौचनले गरे । उनले निर्माण व्यवसायी गुटमा होइन् एक ढिक्का भएर […]
बेनी (म्याग्दी) । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा राहदानी दस्तुरबाट रु एक करोड ४३ लाख ४७ हजार राजश्व संलन भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयका लेखापाल विष्णुप्रसाद शर्माका अनुसार सोही अवधिमा संस्था दर्ताबाट रु दुई लाख ३८ हजार, हातहतियार इजाजतपत्र नवीकरण तथा दर्ता शुल्कबाट रु ३० […]